Shiinaha Hal Mar oo Nuugista Cantilever Dredge saar warshad iyo shirkado | Mashiinnada Delin
Qiiji Wasakhda Gaaska Qiiqa
Dhismaha mashiinkan taxan ee DG waa hal-marxalad, hal-sucti ...
Single Stage Single Nuction Cantilever Dredge saar
Moodel: DG Tax Qashin saar
Xawaare (r / min): 175-1400
Awoodda (m³ / h): 36-28000
Madaxa (m): 3.5-78
Waxtarka ugu fiican: 30% -87%
Aaladda usheeda dhexe Pa (KW): -
La oggol yahay cabirka walxaha ugu badan (mm): 82-350
Miisaanka bamka (kg): 460-121000
Dheecaanka Dia. (Mm): 100-1000
Nuugista Dia. (Mm): 150-1200
Nooca Khatimidii: Shaabad farsamo
Dareere Baabuurta: 3,4,5 Qalabka lineriyaha: Daawaha Sare ee Chrome
Nooca: Xidh Maaddada sanduuqa: Birta tuur / Daawaha sare ee chrome
Qalabka: Daawaha sare ee chrome Aragtida: Mashiinka Centrifugal
Ballaca (mm): 920-2710 Qaabdhismeedka: Mashiinka mashiinka hal-mar ah
Delin Makiinado waxay ku takhasustay soo saarida bambooyin qulqulaya, matoorrada baab'inta iyo matoorrada qodidda ee Shiinaha.
Magacaabista Mashiinka taxanaha DG wuxuu ku saleysan yahay sahanno ku saabsan bamka qashin qubka ah ee loo isticmaalo gudaha iyo dibedda. Anaga
waxay ku sameeyeen falanqeyn badan oo tirakoob ah bambooyin qashin ah ama bambooyin dhoobo ah. Qaadashada naqshadaynta hore ee kala duwan
hababka iyo kaaliyaha kombuyuutarka naqshadaynta softiweerka, tani waa nooc cusub oo DG ah bamka qashin qubka, oo loo qoto dheer yahay
qodidda badda ama xeebta, oo ay ku jiraan soo saarista ciidda iyo quruuruxa, ama daabulidda wasakhda. Taxanahan DG-ga ah
bambooyinku waxay muujinayaan waxqabad aad u fiican, qaabdhismeedka qaabdhismeedka wanaagsan, sahlanaanta dayactirka, iyo adeegga muddada dheer, iwm.
Noocyada Mashiinka Dredge
1. Bambooyin DG taxane ah oo heer sare ah, hal nuugid ah, qaab dhismeed jiif ah. Marka la eego cadaadiska soo deynta, waxay u kala qaybsameen laba qaybood: hal mashiinka tuubada lagu rido iyo laba mashiin oo labalaab ah.
2. Naqshad sameynta laba-geesoodka ah waxay wanaajisaa isku halaynta amniga. Haddii xariiqa cufka uu ku dhow yahay inuu duugoobo, ama kala jabo, ma jiri doono daadashada biyaha gudaha guriga bamka. Mashiinka halbeegga ee halbeegga lagu rito waa miisaan fudud iyo mug yar. Dhammaan noocyada DG ee bambooyinkeenna hoose waa la soo tuuri karaa. Moolka qoto-dheer ayaa buuxin kara shuruudaha kala duwan. Dhalshada ayaa adeegsata sumado caan ah oo gudaha ama shisheeye ah. Taxanahan bamka qodku wuxuu leeyahay dhibaato waqti dheer oo shaqo bilaash ah.
3. DG pump pump dredge pump wuxuu adeegsadaa qaab dhismeedka kala furfurida hore, waana sahlan tahay in la istaajiyo, la kala furfuro lana dayactiro. Qaybaha kala duwan waxay leeyihiin qalab kala-goyn gaar ah.
4. Mashiinkayaga qashin-qubka wuxuu qaataa dunta caadiga ah ee isku-xidhka isku xidhka gunta iyo wiishka, isla markaana lagu qalabeeyo ka saarista giraanta piston-ka si loogu fududaado isku-xidhka qalabka wax lagu xidho.
Nooca Awood (Q) Madaxa (H) Xawaare (n) Waxtarka ugu badan NPSH Ballaca Gudaha Ballaca Soo-baxa Ugu badnaan Cabbirka walxaha Miisaanka
m³ / h m r / daqiiqo % m (mm) (mm) (mm) (kg)
Nooca Qiyaasta dulmar
Nooca Qiyaasta dulmar Miisaanka (kg)
Mashiinka Diesel Dredge
Dredger Gravel slurry saar
Mashiinka La Daadi Karaa
Double Casing Dredge saar
Gawaarida Gawaarida Gaarka ah